Semalt miady amin'ny botnet malware
Efa nandritra ny 40 taona mahery ny ordinatera malware na kansera malaza, saingy ny fampiasana azy ireo hamorona zavatra voalamina dia tonga nanamarika rehefa nampidirina ny botnets folo taona lasa izay. Ny botnets dia tompon'andraikitra amin'ny trangan-javatra ara-pahasalamana lafo vidy ao amin'ny aterineto ary nahitàna ireo fitaovan'ny ordinatera sy finday maro. Isan-jatony, maro ny ordinatera no voan'ny botnets, izay manakatona ireo fitaovana ireo.
Nanazava ny lahatsoratra hoe inona ny maloto amin'ny botnet, ny fiparitahany sy ny asany (Ar) i Artem Abgarian, manam-pahaizana manokana momba ny Semalt
Ny teny botnet dia ahitana teny roa, net ary bot. Ny botnet dia vondrona solosaina finday izay manatanteraka asa maro araka ny baiko na fangatahan'ny botmaster. Ny solosaina faharoa rehetra dia mety ho lasa botneto dia tsy natao ny fepetra, ary tsy nametraka software malware ianao. Botnets dia vondron'olona sy singa goavambe misy rafitra mifandraika amin'ny tambajotra orinasa orinasa. Ireo olona izay miasa na manoratra ny malware dia tsy afaka miditra amin'ny fitaovana rehetra, fa afaka mifehy tsara ny asany izy ireo.
Ahoana no hahafantarana raha anisan'ny botnet ny ordinaterako?
Mora ny mahita raha anisan'ny botnet ny solosainao ary azonao atao koa ny manombana ny fiantraikany amin'ny fampiharana ny fitaovana. Rehefa lasa fitaovana amin'ny botnet ny solosaina, dia miasa tsikelikely izy ireo ary tsy manao ny torolalanao..Ankoatr'izany, ireo tranonkala dia tsy mametraka araka ny tokony ho izy, ary ny rafitra fitrandrahana dia mavesatra loatra amin'ny fanontaniana maro. Ny fitondran-tena toy izany dia hita amin'ireo mpampiasa mba hampahafantatra azy ireo fa misy ny botnets. Mety hampahafantarin'izy ireo na inona na inona momba ny fanatrehany izy ireo satria matetika no miasa mangina ny botnets.
Araka ny efa nambarantsika, ny botnets dia nomena andraikitra hanao asa sasany. Izy ireo dia tompon'andraikitra voalohany indrindra amin'ny fangalàhana ny mombamomba ny olona toy ny antsipirian'ny carte de crédit ary mety tsy ho hita amin'ny mpampiasa noho ny fihetsika maotina. Ny botnets dia ampiasain'ireo mpilalao ratsy, izay fantatra ihany koa ho mpampihorohoro. Ny baiko sy ny server manara-maso dia natao hamono ireo botnets.
Ny risika ho an'ny mpandraharaha sy ny mpampiasa trano:
Ny loza ateraky ny botnets dia mitovy amin'ny mety ho fiantraikan'ny programa ratsy sy ny asa mampiahiahy ao amin'ny aterineto. Ohatra, ny botnets dia natao mba hangalarana ny mombamomba anao manokana sy hahazoana ny antsipiriany momba ny karatra. Afaka mahazo ny toetra amam-panahinao ara-tsaina, ny manga, ary ny tenimiafina ihany koa izy ireo ary indraindray manery anao hanindry ny rohy mankany amin'ireo tranonkala iombonana. Tokony ho takatrao fa raha vao teraka ny solosainao dia tsy hanao zavatra hafa intsony izy fa hanao ny andraikitry ny hacker.
Ny tsipika misy eo amin'ny ordinatera sy ny ordinatera dia manjavozavo. Isika rehetra dia mety ho tratry ny aretina botnet, ary ny fomba tokana hanafoanana azy dia ny fametrahana programa fanoherana malware. Ny famantarana sy ny fampiatoana ny malware botneta dia mila miantoka ny safidinao amin'ny Internet. Avy amin'ny fomba fijerin'ny teknolojia, ny botnets dia afaka atsahatra amin'ny programa mpanohitra malware na Antivirus. Azontsika atao ny manajanona ny aretina ao amin'ny tambazotran'ny fifamoivoizana ary afaka manaisotra azy ireo tsy ho ela Source .